Somali News Tv » Al Shabaab Oo Duqayn Lagu Beegsaday Saldhig Ku Yaal D/Awdheegle
Al Shabaab Oo Duqayn Lagu Beegsaday Saldhig Ku Yaal D/Awdheegle
December 5, 2018 - Written by yaxye - Edited byyaxye
Ciidamada Amniga ayaa Howlgal qorsheysan oo looga hortgayo Cadowga Umadda Soomaaliyeed ee Al shabaab ka fuliyay D/Awdheegl ee Gobalka Shabeellaha Hoose, sida uu sheegay Taliska NISA.
Warkan ka soo baxay Taliska Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo dhacay xalay lala beegsaday Maleeshiyo ka tirsan Argagaxisada Al shabaab oo diyaarinayay Qaraxyo ay ku dhibaateeyaan Shacabka.
“Howlgal ciidanka Amnigu xalay ka fuliyay xarun ay Alshabab ku lahayd tuulada Awdheegle, ayaa lagu soo qabtay walxaha qarxa oo loo diyaariyay in lagu dhibaateeyo shacabka. Ciidanka Amniga ayaa naftooda u hura badbaadada shacabka”.ayaa Lagu yiri War ka soo baxay NISA.
Dhanka kale Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Howlgalkaasi la fuliyay xalay saqdii dhexe lagu khaarijiyay Dhagar qabayaashii halkaasi ku diyaarinayay qaraxyo ay ku gumaadaan Shacabka Soomaaliyeed.
“Howlgal qorsheysan ayaa ka dhacay Awdheegle, waxaana xarunta lala beegsaday Weerarkaasi Argagaxisada ay ku diyaarinayeen Walxaha qarxa, waana la burburiyay guud ahaan goobtii howlgalka qorsheysan lagu qaaday si guul ayuu kusoo dhamaaday, Maleeshiyaad badan ayaana goobta lagu laayay”.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in Howlgalo lagu ciribtirayo Al shabaab ay ka socdaan Deegaanada Lambar 60 iyo Buufow oo ka tirsan Gobalka Shabeelaha hoose, iyadoo ay Ciidamada ku guuleysteen in Maleeshiyaadka ay kasoo saaraan Wadada dhanka Xeebta.